Kusimihii Gudoomiyaha Maxkamadda G/Sool iyo nin ganacsade oo la dilay | raascasayrmedia.com
← ROOB LAGU DIIRSADAY IYO BIYO SOO TOGAY MAGAALADA BAARGAAL
Kulan ay yeesheen labada Shariif oo is afgarad waa ku dhamaaday →
May 18, 2011 · 8:09 am
Kusimihii Gudoomiyaha Maxkamadda G/Sool iyo nin ganacsade oo la dilay
Kusimihii gudoomiyaha Maxkamadda gobolkaa Sool iyo nin ganasada ah ayaa caawa lagu dilay Magaalada Laasacaanood ee Xarunta gobolka Sool.
Wararka ka imaanaya Magaalada Laasacaanood ee Xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan in fiidkii caawa dil loogaystay kusimihii gudoomiyaha Maxkamadda gobolka Sool Sheekh Max’ed Ibraahim Samatar iyo nin ganacsada ahaa.
Dilka ayaa gaystay sida la tilmamay ruux ku haybaysnaa Bastoolada oo wajiga u duubnaa, iyadoo markii uu dilay kusimihii gudoomiyaha Maxkamadda Sool uu kasoo horbaxay nin la tilmaamay in uu ahaa ganacsada kaasi oo markii dambe uu isna ku dilay isla goobtii uu ku dilay kusimihii Maxkamadda gobolka Sool.
Goobta uu dilka ka dhacay ayaa waxaa soo buuxdhaafiyay Ciidamada Maamulka Somaliland oo halkaasi ka bilaabay baaritaano oo ay ka baadi goobayana ruuxii ka dambeeyay falalkaasi dilalka ah hase ahaatee ilaa iyo iminka lama oga cidda ay kusoo qab qabteen howlgalkaasi.
Magaalada Laasacaanood ee Xarunta gobolka Sool ayaa marar badan waxaa ka dhacay dilalka qorshaysan oo loo gaysanayo Mas’uuliyiinta Maamulka Somaliland, iyadoo arintaani ay walaac xooggan ka muujiyeen Waxgaradka iyo aqoonyahanada ku nool Magalaada Laascaanood ee gobolka Sool